Mofon’aina – ALAKAMISY 12 OKTOBRA 2017 – Athis Fanantenana
8 Ary ny mpanjakan’ i Syria niady tamin’ ny Isiraely ka nilaza tamin’ ny mpanompony hoe: Any Anonana no hitobiako.9 Ary ilay lehilahin’ Andriamanitra kosa naniraka tany amin’ ny mpanjakan’ ny Isiraely nanao hoe: Tandremo fandrao mankany Ananona ianao; fa any no hidinan’ ny Syriana.10 Ary ny mpanjakan’ ny Isiraely naniraka tany amin’ izay nolazain’ ny lehilahin’ Andriamanitra taminy sy nananarany azy, ka nampiambina tany tsy indray mandeha, na indroa aza.11 Dia sosotra indrindra ny fon’ ny mpanjakan’ i Syria noho izany zavatra izany; koa niantso ny mpanompony izy ary nanao taminy hoe: Tsy hambaranareo ahy va izay eto amintsika momba ny mpanjakan’ ny Isiraely?12 Ary hoy ny mpanompony anankiray: Tsy misy, ry mpanjaka tompoko; fa Elisa mpaminany ao amin’ ny Isiraely ihany no milaza amin’ ny mpanjakan’ ny Isiraely na dia izay teny lazainao ao amin’ ny trano fandrianao aza.13 Ary hoy ny mpanjaka: Andeha, izahao izay itoerany mba hanirahako hisambotra azy. Ary nolazaina taminy hoe: Indro, ao Dotana izy.14 Ary dia nampandeha soavaly sy kalesy ary miaramila be ho any izy; ka tonga alina ireo ary nanodidina ny tanàna.15 Ary rehefa nifoha maraina koa ny zatovon’ ny lehilahin’ Andriamanitra ka nivoaka, dia, indreo, nisy miaramila sy soavaly ary kalesy manodidina ny tanàna. Dia hoy ilay zatovo taminy: Indrisy, tompoko! Ahoana no hataontsika?16 Ary hoy Elisa: Aza matahotra; fa ny momba antsika dia be noho ny momba azy.17 Ary Elisa nivavaka hoe: Jehovah ô, mifona aminao aho, ampahirato ny masony mba hahitany. Ary Jehovah nampahiratra ny mason’ ilay zatovo; ary dia nahita izy, ka, indro, ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesy afo manodidina an’ i Elisa.18 Dia nidina nankany aminy ireo, ary Elisa nivavaka tamin’ i Jehovah ka nanao hoe: Mifona aminao aho, ataovy manjambena ireto olona ireto. Ary dia nataony manjambena ireo araka ny tenin’ i Elisa.19 Ary hoy Elisa taminy: Tsy ity no làlana, ary tsy ity no tanàna; fa manaraha ahy ianareo, dia hitondra anareo ho any amin’ ny lehilahy tadiavinareo aho. Dia nentiny nankany Samaria ireo.20 Ary rehefa tonga tany Samaria izy ireo, dia hoy Elisa: Jehovah ô, ampahirato ny mason’ ireto mba hahitany. Ary Jehovah nampahiratra ny masony, dia nahita izy; ka, indro, tao afovoan’ i Samaria izy.21 Ary nony nahita azy ny mpanjakan’ ny Isiraely, dia hoy izy tamin’ i Elisa: Ry ikaky ô, hasiako va izy? Hasiako va izy?22 Fa izy namaly hoe: Aza asianao izy; moa asianao izay nobaboinao tamin’ ny sabatrao sy ny tsipìkanao? Rosoy mofo sy rano eo anoloany mba hohaniny sy hosotroiny ary handehanany any amin’ ny tompony.23 Dia nanao fanasana lehibe ho azy ny mpanjaka; ary rehefa nihinana sy nisotro ireo, dia nampandehaniny, ary dia nankany amin’ ny tompony izy. Koa dia tsy nankany amin’ ny tanin’ ny Isiraely intsony ny mpitoha adin’ i Syria.
2 MPANJAKA 6 :8-23
Akaiky an’ Andriamanitra tokoa i Elisa, Mpaminany. Nomen’ Andriamanitra saina sy fahaiza-mamantatra mialoha izy , mba hampiomana azy indrindra momba ny anjara fanompoany teo amin’ny fireneny : « fa Elisa Mpaminany ao amin’ Israely ihany no milaza amin’ny Mpanjakan’ Israely na dia izay teny lazainao ao amin’ny trano fandrianao aza » (and 12). Nomen’ny Tompo Fanahy mahery ny mpanompony.
1-Afaka mamantatra ny fahavalo
Rehefa tsara fifandraisana amin’ Andriamanitra Tompo isika mpanompony dia omeny ny fanahiny hitarika antsika hanaovana ny sitrapony. Izy no mpiaro ny Israely ka naniraka ny mpaminany mpanompony hisolo tena azy tao aminy , mahafantatra mialoha ny fahavalo sy ny teti-dratsiny izy araka izany ary mametraka izany fahafantarana izany ao amin’ny mpanompony mba hahatanteraka ny famonjena ny olona . Aoka ho vita fihavanana amin’i Jesoa Kristy isika ka hahazo ny fitarihan’ny Fanahy Masina izay nomeny mba hanaovantsika ny sitrapony handraisan’ny olona ny famonjena nataony teo amin’ny hazo fijaliana.
2-Afaka mitondra teny amin’ny mpitondra
Na dia zon’ny mpanjaka natao noho ny fahefany aza ny mamono ny fahavalo nentina teo aminy dia tsy maintsy nanaraka ny tenin’ny mpanompon’ Andriamanitra izy satria mpitondra natahotra an’ Andriamanitra . Aoka ny manam-pahefana mba hatahotra an’ Andriamanitra ka hihaino ny mpaminany mpanompony satria ireo no mitondra ny hafatr’ Andriamanitra ho famonjena ny olona.
Mahatsapa ny fitarihan’ny Fanahy masina ve ianao ?